DEG DEG:Musharax Madaxweyne Xasan Cali Kheyre oo goordhaw Muqdisho kasoo degay | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii DEG DEG:Musharax Madaxweyne Xasan Cali Kheyre oo goordhaw Muqdisho kasoo degay
Waxaa goordhaw garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kasoo degay Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre sidoo kale ah Musharax u taagan xilka Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya.
Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde waxaa Musharax Xasan Cali Kheyre kusoo dhaweeyay Xildhibaano katirsan Labada Aqal, Wasiiro hore, Siyaasiyiin iyo boqolaal dadweyne ah oo usoo banaan baxay soo dhaweynta Xasan Kheyre.
Musharax Xasan Cali Kheyre ayaana soo dhaweyntiisa kadib loo soo galbiyay xaruntiisa ololaha halkaas oo la filayo in uu kula hadlo Warbaahinta iyo qaar kamid ah dadkii soo dhaweeyay.
Soo dhaweynta maanta loo sameeyay Musharax Madaxweyne Xasan Kheyre ayaa aheyd mid aad u sareesay, waxaana shacabka magaalada Muqdisho usoo banaan baxeen sidii ay usoo dhaweyn lahaayeen Musharaxan oo ah kan hada heesta taageerayaasha ugu badan.
Previous articleGantaallo lagu garaacay caasimadda gobolka Amxaarada
Next articleHalkaa ka daawo Musharax Xasan Cali Kheyre oo markii ugu horey saxaafada la hadlay
Laba magaalo oo yaryar oo ka tirsan gobolka waqooyi-bari ee New Hampshire ayaa codbixinta ku billaabay saqbadhkoodii caadiga ahaa Maalinta doorashada ee Mareykanka ayaa si...
Muhiimadda gobolka Ohio ee doorashada Mareykanka ee maanta